April 2020 | RatoTara.com Websoft University
रोल्पामा बम विस्फोटमा परेर चार बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका-७ गैरीगाउँका चार बालबालिकाको बिहीबार साँझ मृत्यु भएको हो ।
एकै गाउँका बालबालिकाको मृत्यु भएपछि उनका अभिभावक र आफन्तमा शोकमा डुबेका छन्। गाउँमा त्रास फैलिएको छ।घटनास्थलमा फेला परेको विष्फोट नभएको टुइन्च मोर्टारको गोली।
साभार: अन्नपूर्ण पोष्ट/ २०७७-१-१८,
विराटनगर वैशाख १८ गते । रातो तारा डट कम, प्रदेश १ का जिल्ला अस्पतालहरुका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट (मेसु) हरुले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) अभाव भएको बताएका छन् ।
इलाम अस्पतालका मेसु डा.प्रमोद साहले पीपीईको अभाव भएको बताउनुभयो । अभावकावीच सेवा दिईरहेको उहाँले बताउनुभयो । विदेशबाट आएकाहरु र बाहिरी जिल्लाबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा कोभिड १९ का लागि छुट्टै एम्वुलेन्सको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पाँचथर जिल्ला अस्पतालका मेसु डा. बुद्धिबहादुर थापाले पीपीई, एन ९५ मास्क अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले आवस्यक जनशक्ति र बजेटको पनि अभाव भएको सुनाउनुभयो । ताप्लेजुङ अस्पतालका मेसु डा. सनि लामाले अस्पतालमा दरवन्दी कम भएको बताउनुभयो । अन्य जिल्ला अस्पताल सरह सेवा दिएपनि दरबन्दी कम भएको गुनासो गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङका प्रमुख तथा जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनेन्द्र मादेनले कोभिड १९ को व्यवस्थापनका लागि दैनिक काम भईरहेको बताउनुभयो ।
भोजपुर जिल्ला अस्पतालकी निमित्त मेसु डा. पवित्रा श्रेष्ठले जिल्लामा आरडिटी किटको अभाव भएको बताउनुभयो । पीपीई आँफै व्यवस्थापन गरेर काम चलाईरहेको उहाँको भनाई छ । जिल्लामा संक्रमित बढेमा पीपीई अभाव हुने उहाँको भनाई छ । सोलुखुम्वु जिल्ला अस्पतालकी निमित्त मेसु सोनु शेर्पाले अस्पतालमा एम्वुलेन्स नहुँदा विरामीलाई उपचारका लागि लैजानुपर्ने अवस्था आए समस्या हुने बताउनुभयो । जिल्ला अस्पतालमा एउटा पनि सवारी नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
ओखलढुङ्गा जिल्ला अस्पतालका मेसु डा. सन्तोष देवले पीपीई र एन ९५ मास्कको अभाव रहेको बताउनुभयो । धनकुटा जिल्ला अस्पतालका मेसु पुजन विश्वकर्माले स्थायी मात्रै नभएर सवै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट उपलब्ध भएको पीपीई वितरण भईसकेको उहाँले बताउनुभयो । शंकास्पद विरामी बढेमा पीपीई अभाव हुने उहाँको भनाई छ ।
सुनसरी जिल्ला अस्पतालका मेसु डा. सन्तोष राईले अस्पतालले नियमित रुपमा स्वाव संकलन, फिवर क्लिनिक र मोवाईल क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । सुनसरीमा पीपीई अभाव रहेको बताउनुभयो । मेची अस्पतालका मेसु पिताम्वर ठाकुरले आईसोलेसनमा रहेका विरामीको लागि खाना खर्चको अभाव भएको बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले कर्मचारी, स्वास्थ्य सामाग्री अभावको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । थप जनशक्ति तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसकीने उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश सरकारले पठाएको पीपीईको सही सदुपयोग नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पनि जनप्रतिधिहरुले पीपीई लगाएर हिड्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । पीपीईको अभाव जिल्लामा मात्रै नभएर प्रदेश र केन्द्रमा पनि रहेको बताउनुभयो । उहाँले शक्तिशाली देशहरुमा पनि पीपीई अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ पीपीई प्रदेश सरकारले न्युनतम रपमा व्यवस्थापन गरेको छ ।’
कस्ले कस्तो पीपीई लगाउने भनेर नबुझ्दा पनि समस्या भएको उहाँको भनाई छ । कोरोनाको त्रासका वीचमा पनि अस्पतालहरुले अत्यावसकीय सेवा सँगै नियमित सेवा र फिवर क्लिनिक सञ्चालन गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । शुरुवातका दिनमा कोरोनाको आतंक स्वास्थ्यकर्मीमा देखिएपनि अहिले त्यो त्रास हटेर गएको आँफुले पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन गुरुङ,भीरकोट । बैशाख १८, गते। रातो तारा डट कम,भीरकोट स्थित सन्त निरंकारी भवनमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । रक्त संचार सेवा पोखराको विशेष सहयोगमा सन्त निरंकारी मण्डल बयरघारी, भीरकोट जेसिज, भीरकोट नगरपालिका र आँधिखोला पिस युथ क्लबले संयुक्त रुपमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
कोरोना कहरको बाबजुत आयोजना गरिएको कार्यक्रमा ७० जना बढिले रक्तदान गरेका थिए । लकडाउनक कारण देशका विभिन्न अस्पतालहरुमा रगतको अभाव हुँदै गइ रहेको छ । यो कठिन परिस्थितिमा कुनै पनि बिरामीले रगतको अभाव झेल्न नपरोस भन्ने उदेश्यका साथ उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सन्त निरंकारी मण्डलका अध्यक्ष यम बहादुर खत्रीले बताउनु भयो ।
मानव एकताको लक्ष सहित अघि बढेको सन्त निरंकारी मण्डलले २०६५ साल देखि "रगत नालीमा हैन, मानिसको नाडीमा नगाऔ" भन्ने नारा लिएर प्रत्येक बर्ष निरन्तर रक्तदान कार्यक्रको आयोजना गरिंदै आएको छ।
घरघर मै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु
काठमाण्डौ बेशाख १८ गते । रातो तारा डट कम,काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले नागरिकको घर, घर मै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको छ । बैशाख १५ गतेबाट गाउँपालिकाले प्रत्येक नागरिकको घरघर मै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधी वितरण गरिरहेको जनाएको छ । तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलामसिं तामाङले उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाबाट आएका नागरिकका कारण कोरोना त्रास बढेपछि पालिका भित्रका सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङले २६ हजार नागरिकको घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जानकारी दिनुभयो । तेमाल गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शिवहरी पाठकले २० स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि खटिएको जानकारी दिनुभयो ।
बुद्ध जयन्तीको अबसरमा राजदेबी मन्दिरमा हुने पूजा अर्चना यो पटक हुने
काठमाण्डौ बेशाख १८ गते । रातो तारा डट कम,नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल तथा शत्तिपीठ राजदेबी पन्चावती मन्दिरमा यो बर्ष कारोना भाईरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण पूजाआजा नहुने भएको छ । लहान नगरपालिका वाडा नं.१५ ढोडनामा रहेको राजदेबी मन्दिरमा हरेक बर्ष चण्डी पूर्णिमा अथवा बुद्ध जयन्तीको अबसरमा पूजा अर्चना हुने गरेको थियो । नेपाल तथा भारतका बिभिन्न जिललाबाट लाखौको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजन आउने भएकाले जोखिम हुने भन्दै स्थानीय प्रशासन तथा राजदेबी पन्चावती मन्दिर संरक्षण बिकास समितिको संयुक्त बैठकबाट यो बर्ष पूजा आरधना तथा मेला नलाग्ने निर्णय गरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
काठमाण्डौ बेशाख १७ गते । रातो तारा डट कम,सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर आन्तरिक विवाद बढ्न थालेपछि नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्न लागेको हो ।
अब केशी बेरपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बस्ने सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्ने बताइएको छ । यसअघि हिजो बस्ने भनिएको बैठक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छुट्टा छुट्टै छलफल भएपछि बैठक बस्न सकेन ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यादेश खारेज भइसकेको छ । तर, अध्यादेशको औचित्यबारे छलफल गर्न प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सचिवालय बैठकमा समसामयिक राजनीति र स्थायी कमिटी बैठकको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभएको छ ।
टायर पड्किएर एकजनाको भारतिय नागरिको मृत्यु
विराटनगर बैशाख १७ गते । रातो तारा डट कम,विराटनगर–१३ मलाया रोडमा गाडीको टायरमा हावा हाल्ने क्रममा टायर पड्किएर एकजनाको भारतिय नागरिको मृत्यु भएको छ ।
भारत समस्तिपुर घर भएका २५ बर्षीय मो. हैदरको मृत्यु भएको हो । विराटनगर–१३ का जितेन्द्र यादबको सटर भाँडामा लिई गाडीको टायरको पम्चर बनाई बस्दै आएका हैदरको आज दिउँसोे पुरानो टायरमा हावा हाल्ने क्रममा टायरको बीचमा भएको फलाम पड्किएर उनको ज्यान गएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
हैदरलाई फलामको रिङले टाँउको र शरिरमा चोट लाग्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक दिपक थापाका जानकारी दिए ।
मृतक हैदरको शवलाई कानुनी प्रकृयाको लागी कोशी अस्पताल बिराटनगर लगिएको छ भनि घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भईरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
लागु औषध सहित मानिस पक्राउ
बिराटनगर बैशाख १७ गते । रातो तारा डट कम, मोरङ विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.१६ दरैया स्थितमा सवारी साधनहरु रोकी चेकजाँच गर्ने क्रममा दक्षिणबाट उत्तर तर्फ आईरहेको को। ३६ प ५५६० नम्बरको कालो निलो रंगको पल्सर मोटरसाईकल रोकी चेकजाँच गर्दा जिल्ला मोरङ विराटनगर महानगरपालिका वडा नं।५ बस्ने वर्ष ३४ को दिनवन्धु प्रसाद मोदीले तरकारी बोक्ने नेटको झोला भित्र सेतो प्लाष्टिकमा चिनी लगायतका खाद्यन्न सामानहरु राखी सोही खाद्यन्न सामानहरुको बिच भागमा सेतो प्लाष्टिकमा बाँधी लुकाई छिपाई ल्याई रहेको अवैध लागू औषध १५ पन्ध्र बोतल,र ३० तिस चक्की र २४ चौबिस चक्की लागू ओैषध समेत फेला परेकोले उक्त लागू औषध तथा उक्त को। ३६ प ५५६० नम्बरको कालो निलो रंगको पल्सर मोटरसाईकल समेत कानून वमोजिम बरामद गरी निज दिनवन्धु प्रसाद मोदी समेतलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भई रहेको जि प्र का मोरङले रातो तारा लाई बताएको छ ।
बिराटनगर बैशाख १७ गते । रातो तारा डट कम, सि आर भि कटहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्ला मोरङ कटहरी गाउँपालिका वडा नं. ३ कटहरी चोक स्थित पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको को १ च २५३१ नम्बरको मारूती भेनलाई रोकी चेकजाँच गर्दा उक्त गाडीमा अवैध ल्याउदै गरेको घरेलु मदिरा अन्दाजी ५८९ लिटर फेला पारी उक्त मदिरा लिई आउने निम्न स्थान बस्ने निम्न ४ जना मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा ल्याई आवश्यक कारवाहीको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरमा बुझाउने पहल भई रहेको ।
१० जिल्ला मोरङ बेलबारी नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने बर्ष ४० की मिना गुरूङ
२० ऐऐ बस्ने बर्ष ४४ की अनिता राई
३० ऐऐ बस्ने बर्ष ४० की रिता गुरूङ
४० ऐऐ बस्ने बर्ष ३५ की आस्मा तामाङ
५० ऐऐ बस्ने बर्ष ४६ को दिपक गुरूङ (चालक)
प्रविधिविनाको ज्ञान उपयोग हुन सक्दैन ः मन्त्री घिमिरे
विराटनगर, वैशाख १७ गते । रातो तारा डट कम, प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । प्रविधि विनाको ज्ञान उपयोग हुन नसक्ने भएकाले यसको प्रयोगमा उहाँले जोड दिनुभएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा सञ्चालित भर्चुअल अनलाईन तालिममा बोल्दै मन्त्री घिमिरेले प्रविधिका माध्यमबाट जिविकाको साधन खोजी गरिनुपर्ने बताउनुभयो । जनशक्तिको उत्पादनविना प्रविधिको गीत गाउन नसकीने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र शिक्षालय हो ।’ शिक्षकहरु दक्ष भएमात्र जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने भएकाले शिक्षकमा इ—लर्निङको ज्ञान हुनुपर्ने मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । शिक्षकलाई दक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा मन्त्रालयले पहिलो क्रियाकलाप शिक्षक केन्द्रित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्नुअघि देखि नै इ—लर्निङ काम शुरु गरिसकेको मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । प्रदेश १ लाई १० वर्षभित्रमा झोला र किताव विस्थापीत गर्ने घोषणा अनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का १ सय विद्यालयका १ सय फोकल शिक्षकलाई केन्द्रित गरेर इ—लर्निङ काम शुरु गरेपछि यसको माग बढ्दै गएको मन्त्री घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले प्रविधितर्फ अहिले आकर्षण बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ भविष्यको गन्तव्य प्रविधिबाट तय हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।’ नयाँ सिकाईको खोजीमा रहेको र थालनी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
विराटनगर । रातो तारा डट कम, प्रदेश १ सरकारद्धारा सञ्चालित कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न साँझेदार संस्थाहरुसँग हिजो छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँग संवन्धित प्रदेश १ मा कार्यरत अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुसँग आज मन्त्रालयमा छलफल गर्दै सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको उपस्थितिमा वसेको बैठकले कोभिड अस्पतालका लागि आवस्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री सहयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
अस्पताललाई सहयोग गर्न इच्छुक संस्थाहरुले आगामी वैशाख १९ गते भित्रमा विववरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले यसअघि गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएको छ ।
अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमित १० लाख नाघे
काठमाण्डौ बेशाख १७ गते । रातो तारा डट कम,कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० लाख नाघेको छ । अमेरिकामा मात्रै १० लाख १० हजार ५ सय ७ जना मानिसमा कोरोनाको सङ्क्रमण भएको छ ।
५६ हजार ८ सय ३ नागरिकको भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । इटलीमा कोरोेनाका कारण २६ हजार ९ सय ७७ मानिसको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ९९ हजार ४ सय सङ्क्रमित भएका छन् । विश्वभर नै गरेर ३० लाख ३१ हजार २ सय १३ मा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ ।
जसमध्ये ९ लाख ३० हजार ६ सय ७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । विश्वभर नै २ लाख १२ हजार ३ सय ३६ जनाको भने कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ ।
सुन्दरहरैंचामा लकडाउन थप कडा हुँदै
शिव भट्टराई,मोरङ बैशाख १६ गते । रातो तारा डट कम,लकडाउनलाई थप कडा पार्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछी सबै जिल्लामा थप कडा गरे सगै सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाबल नेपाल हाइवे चेक पोस्ट मोरङ सलकपुरले पनि कडा गरेको छ।
शसस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल नेपाल हाई चेक पोस्ट सलकपुरले मंगलबार बिहानै लकडाउन उलंघन गरेका तथा सवारी साधन र अन्यावश्यक रुपमा हिड्ने ब्यक्तिलाई समाजिक दुरि कायम गरेर सचेतनामुलक कार्यक्रम गरि सचेत गराएको छ।
देशमा केही दिन अगाडि बिच बाटोमा पुगेका र बिचल्लीमा परेका मजदुर र सर्वसाधारणलाई उद्दारका लागि सांझको समयमा केही दिन सवारी सन्चालनमा अनौपचारिक रुपमा खुकुलो गरि उद्दारको लागि सहज बनाएको थियो।
गृह मन्त्रालयले पासबिनाका सवारी साधनमा आवजावतमा रोक लागाउन निर्देशन दिएपछी सुन्दरहरैंचाको सलकपुरमा रहेको हाइवे चेक पोस्टले चेक जांचमा कडाई गरेको छ।
लकडाउन उलघनक गर्ने क्रम बढेपछी मंगलबार बिहान अति आवश्यक आक्स्मिक सवारी साधन र चेक पास बाहेक सवारी साधनलाई रोकेर, सामाजिक दुरी कायम गराएर सचेत गराएको छ। कतिपय पास लिएका सवारी साधनको दुरुपयोग हुन थालेपछि सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल नेपाल हाईवे चेक पोस्टले एम्बुलेन्स र अन्य अति आवश्यक बस्तु ओसारपसारको सवारिमा पनि छड्के चेक गरेको थियो।
हामी लकडाउन उलंघन गरेका ब्यक्तीलाई किन लकडाउन उलंघन गर्नु भयो भन्ने प्रश्न गर्दा कतिले क्यामेरा अगाडि बोल्न चाहेनन्।
कोहि मर्निङ्ग वाकमा, कोहि पान खाने निहुमा त कोहि खैनी सुर्ती किन्ने निहुमा अनेक बहाना परेर निस्केका थिए। कति बिना पासमै आफ्नो काममा निस्केको पाईयो।त्यसैगरी बिना पास तथा सिफारीस नलिएको सवारीमा मेडिकल सामाग्री भनेर चलेकट केक र केही थान सेनिटाजर ल्याएको समेत भेटियो।
सचेतना कार्यक्रम गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल सलकपुर हाइवे चेक पोस्ट बिहान ६:०० बजे देखि ८:०० बजे सम्म चेक जाँच गर्दा अहिले कमि भएको प्रहरी निरिक्षक बिदुर भट्टराईले जानकारी दिनु भयो।
सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल नेपाल हाईवे चेक पोस्टले लकडाउनकै क्रममा भएको चोरी निकासी घटना होस या बिपत ब्यबस्थापनमा होस, जनताको सेवामा अहोरात्र खटिरहेको छ। यस अघि सुन्दरहरैंचामा लुकेर रहेका ३ जना भारतिय नागरिकलाई पुर्वान्चल बिश्वबिधालय शिक्षण अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा लान होस या अन्य कार्यमा चौविसै घण्टा खटिरहेका छन।
यो विषम परिस्थितिमा हुलमुलका साथ सवारी साधनमा यात्रा गर्दा कोभिड १९ को संक्रमण भएर थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर लकडाउन पालन गर्नु तपाईं हामी सबैको दायित्व हो।
झापा, बैशाख १६ गते । रातो तारा डट कम,झापाको मेचीनगर नगरपालिका-६ मेची पुलबाट ५० ग्राम नियन्त्रीत लागुऔषध ब्राउनसुगर सहित १ जना पक्राउ परेका छन् । सोमवार राती पौने १० बजेको समयमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको मेची पुल मुनी खाल्डो खनेर लुकाउँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मेचीनगर नगरपालिका-६ का ५८ बर्षीय बच्चु चौधरीलाई उक्त परिणामको लागुऔषध ब्राउनसुगर सहित पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका चौधरीको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भईरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
आगलागीबाट १४ लाख बढीको क्षति
झापा, बैशाख १६ गते । रातो तारा डट कम, झापा गाउँपालिका-३ सिमलवारीका लाल प्रसाद राजवंशीले संचालन गरेको धानमिलमा आगलागी हुँदा अन्दाजी १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सोमवार दिउँसो ३ बजेको समयमा चट्याङ परी बिद्युतको तार सर्ट भई अचानक निजको धान मिलमा आगलागी हुँदा राजवंशीको मिल घर तथा छिमेकी प्रल्हाद मण्डलको २ वटा कच्ची घर समेत जलेर नष्ट हुँदा उक्त मुल्य बराबरको क्षति भएको हो । उक्त आगलागीबाट मानवीय तथा चौपाया क्षति नभएको तथा प्रहरी, स्थानीयवासी र दमकल समेतको सहयोगमा पौने ५ बजे आगो नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
दुई वटा निलगाई मारेको भन्दै,घटनावारे अनुसन्धान भइरहेकोछ
काठमाण्डौ बैशाख १६ गते । रातो तारा डट कम,कपिलवस्तुमा एक साताको अवधिमा दुई वटा निलगाईको हत्या गरिएको छ । लकडाउनको समयपारी सिकारीहरुले निलगाई मारेका हुन् । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका ८ लोहोरौलामा एक निलगाइ मृत अवस्थामा प्रहरीले फेला परेको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय वहादुरगन्जको टोलिले जालमा फसेको अवस्थामा फेला परेको थियो । उक्त स्थानबाट दुई वटा मोटरसाइकल समेत बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको वहादुगंञ्जका प्रहरी नायव निरीक्षक अभय रावतले बताउनुभयो । लु २५ प ५२२९ र लु २ प २३ नम्बर मोटरसाइकल बरामद गरिएको रावतले बताउनुभयो । प्रहरिले मृतक निलगाइ र मोटरसाइकल डिभिजन बन कार्यालय गौतमबुद्वलाई बुझाएको छ । त्यस्तै वैशाख १० गते बुधवार महाराजगंज नगरपालिका ९ जितपुरमा गोलि लागेको अवस्थामा फेला परेको थियो । स्थानीय किसानले गोली लागि मरेको अवस्थामा निलगाई देखेपछि प्रहरीलाइ खबर गरेका थिए । वैशाख १ गते पनि महाराजञ्जमै एक नलिगाई मरेको अवस्थामा फेला परेको थियो । तीन वटै घटना संम्लग्न व्यक्ति फेला नपरेको डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्धका वन अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्कीले बताउनुभयो । घटनावारे अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
निजी प्रयोगशालाले पनि कोभिड परीक्षण गर्न पाउने
काठमाण्डौ बैशाख १६ गते । रातो तारा डट कम,अब निजी प्रयोगशालाले पनि कोभिड परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोभिड परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको न्यूनतम मापदण्डको निर्देशिका जारी गरेको बताउनुभयो । अब निजी प्रयोगशालाले पनि कोभिड १९ को परीक्षणका लागि बाटो खुलाभएको डा. देबकोटाले जानकारी दिनुभयो । सञ्चालन मापदण्ड पूरा गर्ने प्रयोगशालाले मन्त्रालयबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ५२ रहेको छ । जसमा १६ जना निको भएका छन् । आजसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट ४३ हजार ६३ नमुना परीक्षण भएका छन् भने पीसीआर विधिबाट १० हजार ४ सय ७१ परीक्षणहरु भएका छन् । दुवै विधिबाट ५३ हजार ५ सय ३४ वटा परीक्षणहरु भएका पनि देबकोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी आजको आइसोलेसनमा देशभरी १०६ जना रहेका छन् । काठमाडौँमा ८ जना आइसोलेसनमा छन् भने उपत्यका बाहिर ९८ जना रहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा २० हजार १सय ९५ जना रहेका छन् ।
इटलीमा लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी हुदै,
बिदेशको खवर,काठमाण्डौ बैशाख १६ गते । रातो तारा डट कम,इटलीमा मे महिनाको ४ तारिखदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ । लगातार तेस्रो हप्ता कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आएपछि इटली सरकारले त्यहाँ जारी गरेको बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने तयारी गरेको हो । इटलीमा पछिल्लो २४ घन्टामा त्यहाँ मात्र २ सय ६० जनाको मृत्यु भएको छ । यसअघि शनिबार ४ सय १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रधानमन्त्री गुइसेपे कोन्टेले मार्च महिनाको मध्यदेखि लगाइएको प्रतिबन्धका प्रावधान मे महिनाको चार तारिखदेखि खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सानो संख्यामा मानिसहरु उपस्थित हुने तर, मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, पार्कहरु खुल्ने, तर विद्यालय भने सेप्टेम्बर महिनामा खोल्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार इटलीमा हालसम्म कोरोनाका कारण २६ हजार ६ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ९७ हजार ६ सय ७५ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् ।
काठमाण्डौ बैशाख १५ गते । रातो तारा डट कम,त्रिपूरासुन्दरी गाउँपालिका–३ मा सञ्चालन भएको घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी अभियान अन्तर्गत ३ हजार ६ सय नागरिकले घरमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् । ४ दिनसम्म सञ्चालन भएको अभियानमा वडाभरका नागरिकहरुको स्वास्थ्य जाँच गरिनुको साथै प्रयेक घरमा दुईथान डिटोल साबुन र प्रत्येक व्यक्तिलाई मास्क वितरण गरिएको अभियानमा संलग्न स्वास्थ्थकर्मी रामप्रकाश यादवले जानकारी दिनुभयो । टोल टोलमा पुगेर वडाका दीर्घरोगीहरुको विवरण संकलन पनि गरिएको छ । नियमित रुपमा औषधी सेवन गरिरहेकाहरुको विवरण संकलन गरि उनीहरुलाई आवस्यक औषधी प्रदान गरिएको वडाअध्यक्ष सुकदेव रिसालले बताउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मीसहित स्यंमसेवक दस्ता बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।